Bhaupanthi | Online Sahitya
अघोरीहरू / भाउपन्थी
राति कतिबेला हो, त्यो थाहा भएन। तर, त्यो एउटा मुसो पानीको बाल्टीमा खसेर मरेछ। छप्ल्यांग आवाज आएको पनि सुनिएन। सायद पानी 'साइलेन्ट किलर' बनिदिएछ। पानीले भरएिको बाल्टी ढाक्नुपर्ने थियो। प्रचार पनि यही गरन्िछ अर्थात् स्वास्थ्यका लागि पानी ढाकेर राख्नुपर्छ। सजिलो कुरो हो, पानी ढाक्नुपर्छ भन्नु। तर, प्रश्न यो जन्मन्छ, पानी नै नआउने धारामा पानी कसरी झार्ने र कुन भाँडालाई किन ढाक्ने !
Read more about अघोरीहरू / भाउपन्थी
निरावृत्त / भाउपन्थी
ऊ मर्निङ वाकमा निस्केको छ र एक्लै छ । ऊ एक्लै मर्निङ वाकमा निस्केको छ भने पनि हुन्थ्यो । तर भनाइको यो एउटा छोटो शैली हुने थियो र त्यसले उसको मानसिक द्वन्द्वलाई प्रतिनिधित्व गर्ने थिएन । कारण थियो, आज बिहान पनि उसले छेउको कोठामा बस्ने केटाको ढोकाअगाडि एकजोर जनाना स्यान्डिल देखियो र अघिल्ला दिनहरूझैँ त्यसतिर उसको तीव्र जिज्ञासा जाग्रत भएको थियो । केटाहरू, होइनहोइन केटीहरू ! केटाहरू आआफ्ना ठाउँमा ठीक छन्, तर केटीहरू अझ बोल्ड र फ्री भएर आएका छन्, उसले सोच्यो । तर कहाँ छन् त्यस्ता केटी ?
Read more about निरावृत्त / भाउपन्थी
उदाहरणीय लघुकथासङ्ग्रह 'अर्जुनदृष्टि' / भाउपन्थी
डा. रवीन्द्र समीर नेपाली लघुकथालेखनका क्षेत्रका एक परिचित र चर्चित सर्जकको नाम हो । उनका यसअघि चार वटा लघुकथासङ्ग्रह प्रकाशित छन् । डा. समीरको प्रस्तुत लघुकथासङ्ग्रह 'अर्जुनदृष्टि' मा पूर्वप्रकाशित तर अप्राप्य भइसकेका र नयाँ गरी १०८ वटा लघुकथा समाविष्ट छन् । सबै लघुकथाहरू स्तरीय र लेखकीय कौशलका परिचायक छन् । कथाका विषयवस्तु चयनप्र्रति पनि डा. समीर अत्यन्त सजग र चनाखा देखिन्छन् । कथाविषयलाई उनी राम्ररी पर्गेलेर त्यसको गहन विश्लेषणपछि कथा रचनामा ढाल्ने गर्छन् उनी ।
Read more about उदाहरणीय लघुकथासङ्ग्रह 'अर्जुनदृष्टि' / भाउपन्थी
लाइफ इज ब्युटीफुल ! / भाउपन्थी
नत्र हामी, म र मेरी श्रीमती राधा अझै निकै बेरसम्म सुत्ने थियौँ । धेरै सुत्ने र कम खाने अभ्यासमा हामी लागेका छौँ । जागिरको तलबले पूरै महिना धान्न धौधौ मात्र होइन पुग्दै नपुग्ने भइरहन्छ । त्यसैले धेरै सुत र कम खाऊ, कम खर्च गर भन्ने सिद्धान्त हामीले प्रतिपादन गरेका छौँ । बिहे भएको तीन वर्ष भइसक्यो तर हामीले सन्तानोत्पत्तिबारे अझै विचार गर्न सकेका छैनौँ, राधाको पहिलो गर्भ खेर गएपछि । काखमा बच्चा खेलाउने रहर रहरमै सीमित गरेर बसेकी छ राधा, मेरी श्रीमती । वास्तविक कुरो उसले थाहा पाएकी छैन । मनको भ्रम निवारण गर्न कन्डोमसन्डोम, पिलसिल छोडेर उसले लामो अवधिसम्म गर्भ रोक्ने कपर टी हो कि के हो लगाएकी छ
Read more about लाइफ इज ब्युटीफुल ! / भाउपन्थी
Subscribe to Bhaupanthi